Yekutora chishandiso ndeyeMicrosoft Windows Screenshot software iri kuiswa mukati Windows Vista uye neshanduro dzese dzapashure. Iyo Screenshot utility yakatanga kuburitswa munaNovember 2002 kureva makore gumi nemasere apfuura. Saka, iyi isoftware yekare asi vanhu vazhinji vachiri kusazviziva kana kusaziva mashandisiro ayo.
Iyo software inoshandiswa kutora zvidzitiro zvechero nzvimbo yemakona, hwindo rakavhurika, nzvimbo yemahara, kana iyo skrini yese. Aya maburi anogona kushandiswa kududzira nekushandisa piritsi kana mbeva. Iwo akatorwa masikirini akachengetedzwa sefaira remufananidzo (GIF, PNG, kana JPEG faira), kutumirwa tsamba paemail, kana faira reHTML. Zvakare, chishandiso chekubvarura zvakare chinoita kuti vashandisi vaite yekutanga dhizaini yemufananidzo iyo iyo vashandisi vanogona kushandisa peni dzemavara akasiyana, inosimudza, kana eraser, nezvimwewo Nhasi, software yacho iri kushandiswa zvakare zvakanyanya nekuda kwekuita kwedhijitari. pamusoro pemalaptop uye desktops nekuda kwekuvhara uye kushanda kubva pazviitiko zvekumba.
Ndedzipi nzira pfupi dzekushandisa kushandisa Microsoft Windows Kudzura Turu?
Iyo Microsoft Windows Snipping Turu iri nyore kwazvo uye iri nyore kushandisa skrini yekushandisa. Uchishandisa Microsoft Windows Yekutora Chishandiso, imwe inogona kutora hwindo rese kana chikamu chakakona chechiratidziri kana kungoshandisa chishandiso cherusununguko kudhirowa kutenderedza zvinhu uye kungobata iyo yakasarudzika chikamu cheiyo skrini. Kunze kwezvo, iyo yazvino vhezheni ine yakasarudzika yekunonoka ficha iyo inofambisa iyo vashandisi mukutora pop-kunze kana kurudyi-tinya menyu.
Kana zviri nzira pfupi, iyo yekuziva nzira yekudimbudzira makiyi nezveimwe software kwete chete yekumhanyisa mashandiro ebasa asi zvakare inowedzera chinhu chekuita basa. Asi aya makiyi ekudimbudzira, kuti ashande, anoda Yekushandisa Yekushandisa chishandiso kuti ugare wakavhurika uye uchitarisa. Nekudaro, hapana cheKutsemura Chishoma nzira yekuvhura Windows Kutora Maturu asi nzira pfupi yekhibhodi inogona kuitwa hazvo!
Tora Screenshots mu Windows
Paunenge uri pamusoro peKutanga Screen kana Metro UI, iwe unongofanirwa kudzvanya pane iyo Yekuvhura Turu icon kuti uvhure. Mushure mekuvhurwa kwechishandiso, unogona kuzviwana iwe pakarepo padesktop. Ipo, muDesktop Mode, iwe unongofanirwa kunyora Chombo chekutsvaira muCharms Bar Tsvaga kuti uwane uye uvhure chishandiso. Kunze kwezvo, iwe unogona kugadzira nzira pfupi yedesktop kuti uwane nyore kana paine nguva dzose kushandiswa.
In Windows 8 Start Screen, unogona kubaya app seTile nekudzvanya kurudyi pachiratidziri, wobva wadzvanya pane "All App" sarudzo, uye pakupedzisira uchisarudza iyo Yekushandisa Yekushandisa mune ese maapp. Zvino, iwe unofanirwa kusarudza iyo "Pin kuti utange" sarudzo yekuisa app se tile pane yako yekutanga skrini.
Pakudzvanya skrini kubva kubhurawuza uye nekuichengeta seHTML faira, panowoneka URL pazasi peiyo snip. Kuti udzivise kuoneka kwe URL, iwe unofanirwa kuvhura Sarudzo uye uncheck Inosanganisira URL pazasi pezvimedu (HTML chete) bhokisi rekutarisa.
Kushandiswa kweHotkey Kuvhura Snipping Turu
Sezvambotaurwa, hapana kiyi pfupi yekuvhura Microsoft Windows Snipping Turu asi iwe unogona kugadzira hotkey yekushandisa kazhinji. Kuti uite kudaro, iwe unofanirwa kuvhura iyo System32 folda uye wobva wadzvanya-kurudyi paSnipping Tool.exe kana nzira yayo pfupi mufaira reChirongwa / Chishongedzo. Zvino, sarudza zvivakwa uye kubva apa unogona kugadzira hotkey yayo. Semuenzaniso, unogona kusarudza F5 sehotkey uye saka nguva inotevera paunenge uchingofanira kumanikidza F5 kuvhura chishandiso.
Mhando dzakasiyana dze Screenshots
Iyo Snipping Utility inoita kuti vashandisi vatore mhando ina dzakasiyana dzeescreen sezvakanyorwa pazasi:
Yemahara- fomu Snip rega vashandisi vatore uye vatore zvisina kufanira chikamu cheiyo skrini.
Rectangular Snip inoita kuti vashandisi vadhonze chitambi chakakomberedza chinhu kuti vaite rectangle.
Window Snip inoita kuti vashandisi vasarudze hwindo rakavhurika, senge browser browser kana dialog bhokisi, uye riitore.
Yakazara-Screen Sniplet iyo vashandisi inotora iyo yakazara skrini.
Mushure mekushandura marongero kune izvo zvaunoda, vashandisi vanogona ikozvino kudzvanya paNew kana Ctrl + PrtnScr kutora mifananidzo.
Win + PrntScr mukati Windows
Win + PrntScr ndiyo kiyi ipfupi iyo inoita kuti iwe utore zviratidziro maererano nezvinodiwa zvako. Mufananidzo wakadhirowewa unochengetwa otomatiki mufaira reMifananidzo.
Kubvuta Turu Mamwe Mamwe maKidhibhokisi Mapfupi:
Alt + M - Nekusarudza iyo Yekubvambura modhi
Alt + N - Zvekugadzirwa kweiyo nyowani nyowani mune imwechete modhiyo
Shift + Arrow Keys - Yekufambisa iyo inotora kuti usarudze rectangular snip nzvimbo
Alt + D - Yekunonoka kubatwa nemasekondi 1-5
Ctrl + C - Yekuteedzera iyo snip kune clipboard
Ctrl + S - Zvekuchengetedza iyo skrini kutora.
Ctrl + E - Zvekugadzirisa muPendi 3D
Ctrl + P - Yekudhinda iyo skrini inotora
Alt + F - Yekuwana iyo File menyu
Alt + F ipapo T ipapo E - Zvekutumira iwo mapikicha se-e-mail.
Alt + F ipapo T ipapo A - Yekutumira iwo mapikicha sechibatanidzwa mune tsamba
Alt + TF ipapo P - Yekusarudza Pen chishandiso
Alt + T ipapo P ipapo R - YeRed Pen
Alt + T ipapo P ipapo B - YeBlue Pen
Alt + T ipapo P ipapo L - YeNhema Peni
Alt + T ipapo P ipapo P - Yekugadzirisa Pen Ruvara
Alt + T ipapo H - YeKusarudza Highlighter turu
Alt + T ipapo E - Yekusarudza Eraser chishandiso
Alt + T ipapo O - Yekumisikidza Snipping Chishandiso sarudzo
Tora chikamu chekrini Uchishandisa Hotkey
Winkey + Shift + S ndiyo kiyi pfupi yekutora chikamu chechidzitiro mu Windows 10. Mumwe anogona kutogadzira ipfupi desktop nekushandisa iyo yekuraira kudzura chishandiso / clip mubhokisi renzvimbo
Tora zvikamu zve Windows Kutanga Screen
Kuti utore chikamu chekutanga skrini mu Windows 8, iwe unofanirwa kuvhura Snipping Turu, tinya Esc. Wobva wadzvanya Win kiyi kuti uchinjire kuKutanga skrini, mushure mekudzvanya Ctrl + PrntScr uye fambisa mbeva yako yegunduru uchitenderedza nzvimbo yaunoda. Aya matanho anofambisa vashandisi kutora chikamu chako Windows Kutanga screen. Nepo, kuti utore iyo yekutanga Screen, unofanirwa kudzvanya Win + PrntScr.
Tora Menyu Yekutaura neKubvuta Turu
Kuti utore screenshots yemenu yemukati menyu, unofanirwa kutanga Snipping Tool uye tinya pa Esc., Mushure meizvozvo, tinya kurudyi pane desktop, faira, kana dhairekitori, wobva wadzvanya Ctrl + PrntScr. Nokuita izvi, vashandisi vanogona kutora iyo-kurudyi-mamiriro mamiriro menyu. Uku kunyengera kunoshandawo mukati Windows 7 kutora menyu yekutanga.
Iyo Yekutora Chishandiso chishandiso chakakura pane mushandisi chaunoshandisa. Kana iwe uchiziva nzira dzakakodzera dzekuishandisa, unogona kuishandisa kune izere kugona.
Microsoft WindowsKuchenesa Tool